Ukuphoqa Amasu kusuka ku-Semalt - Indlela Yokuvimbela Ugaxekile Wokudluliselwa Kwe-Google Analytics
Ugaxekile wokudluliselwa kwe-Google Analytics luye lwavame kakhulu ezinyangeni zamuva ngenxa yemiphumela yaso embi. Lokho kunamandla okwehlisa amandla amasayithi akho nobuqiniso bawo kungakapheli amaminithi. Ugaxekile wokudluliselwa olwenzekayo uma iwebhusayithi yakho ithola inombolo enkulu yezintambo zokukhohlisa kanye ne-spam bots. Ungase uzizwe ukuthi lezo zingozi ezisemthethweni, kodwa empeleni azikho. Ukugaxekile kokudluliselwa kwe-Google Analytics kuyinto okudingeka uyilawule ngokushesha ngangokunokwenzeka. It uzothola isayithi yakho eziningi traffic, kodwa lokho akuhle lutho futhi kungaholela Google ukukhubaza i-AdSense yakho. Ngeke ikuvumele ukuthi uzuze imali kwi-intanethi njengomthengisi noma ibhizinisi.
uFrank Abagnale, oyedwa ochwepheshe abahola phambili Semalt , uchaza ezinye izimfihlo zokuvimba ukugaxekile kogaxekile.
Hlola i-Google Analytics yakho nsuku zonke
Kubalulekile ukuhlola i-Google Analytics yakho bese ulungisa imibiko yakho nsuku zonke. Uma imiphumela yakho ibonakala ingajwayelekile noma unomuzwa wokuthi isayithi lakho lithole imoto engalungile, lesi yisikhathi sokuthatha izinyathelo. Uma isayithi lakho lithola ithrafikhi engavamile, kufanele ucabange ngokuvimbela ugaxekile wokudluliselwa kwe-Google Analytics nawo wonke lawo ma-IP avela lapho lezi zinhlelo zokudlulisela zifikile khona. Abantu abaqhuba amawebhusayithi anjalo bayazi izinyathelo zokuthola i-URL yabo ibonise idatha yakho ye-Google Analytics. Basebenzisa amasu ahlukahlukene kule njongo, ephuma ebucayi kuya ekukhohliseni..Ngokuvamile, umgomo wabo ukuthola isayithi lakho ukuvakashelwa okufakekile kanye nomgwaqo okuyinto ongase uzizwe ukuthi ivumelekile. Ngokusekelwe kokufakiwe, bangalimaza isayithi lakho futhi bavule izihloko zalo. Enye yezindlela ezilula zokuziqeda ngokuvumela amakhukhi wakho. Faka amakhukhi kusayithi lakho futhi uhlale uthola ulwazi oluvela kubasebenzisi, amaphrofayela abo, namadivayisi abo noma nini lapho bevakashela isayithi lakho.
Ngisho noma zibukeka zivumelekile futhi zithembekile, zikusiza ukuba ufike ekhasini lokuqala le-Google, akufanele uzithembele kuzo nemiphumela yazo. Bazokunikeza amakhodi athile futhi bazokucela ukuba ufake lawo makhodi kusayithi lakho. Ukuhlala kude nawo wonke amacebo namaqhinga anjalo kubalulekile.
Indlela Yokuhlunga I-Google Analytics Referral Spam
Ukuhlungwa kwe-Google Analytics ukuxhunywa kogaxekile kungenziwa uma uvimbela wonke lawa masayithi: ukwenza imali, i-ranker-checker, ukugcinwa kwemithetho ye-cookie, ukuhlolwa komthetho, izinkinobho zenhlalo, ukulungisa amaphutha-website, amagama angukhiye -onitoring-impumelelo, i-free-video-ithuluzi, i-magicdiet, i-ownshop, i-site-auditoritor, nezinye.
Izindaba ezinhle ukuthi ungavimbela ukugaxekile kogaxekile njalo. Ungakwazi futhi ukulungisa izilungiselelo zakho ukuvimbela ukufika kwabo esikhathini esizayo. Ngivumele lapha ngitshele ukuthi iningi logaxekile lokudluliselwa empeleni aluvakashele isayithi lakho. Eqinisweni, kuyindlela yokukhohlisa i-AdSense yakho ne-Google Analytics. Ukuvakashelwa kweghost kusho ukuthi isayithi lakho alitholi abantu bangempela ukufunda nokuhlola okuqukethwe kwakho. Ngakho-ke, kungathinta izikhathi zakho eziphelele, isikhathi kwiwebhusayithi, izinga lokunciphisa kanye nesilinganiso sokuguqulwa. Iningi labanikazi besayithi bakholelwa ukuthi i-spam yokudlulisela i-Google Analytics iyasebenzisa, kodwa empeleni ayikho. Ibeka amakhulu ezinkulungwaneni zamawebhusayithi nsuku zonke, futhi ayikho indlela yokukhipha ngayo yonke. Yini ongayenza ukuvimba ama-IPs bese udala izihlungi. I-Google inikeze abasebenzisi bayo ngethuluzi lonjiniyela okuthiwa yiProtocol Yokulinganisa. Ungasebenzisa leli thuluzi ukuhlola ukuthi ngabe isayithi lakho lithola yini ithrafikhi esemthethweni noma cha.